🥇 ▷ WOM waxay soo bandhigaysaa boorsooyinkeeda wareega wareega Uber, Booqashada iyo Khariidadaha Google gabi ahaanba aan xadidnayn ✅
WOM waxay soo bandhigaysaa boorsooyinkeeda wareega wareega Uber, Booqashada iyo Khariidadaha Google gabi ahaanba aan xadidnayn
Kuwa nasiibka u leh inay safraan meel ka baxsan Chile inta lagu gudajiray Toddobaadka Barakeysan, hawlwadeenka WOM wuxuu bilaabay bacaha cusub ee wareega si ay ugu xirnaadaan inta ay safarka ku jiraan.
Boorsooyinka waxaa ku jira Uber, Khariidadaha Google iyo Codsiyada Boos-gelinta oo leh marin dhammaystiran oo aan xadidneyn (marka lagu daro WhatsApp oo wicitaanno ah), waxay ka bilowdaan maalin dhan 10MB oo ah CLP $ 1,990, halka saddexda maalmood ee helitaanka 50MB ay ku kici doonaan CLP $ 6,990.
Hadda haddii aad nasiib u leedahay inaad ku safarto maalmo dheeraad ah, WOM waxay bixisaa boorsada 7-maalmood ah oo leh 100MB oo ah CLP $ 12,990. Haddii aad rabto 15 maalmood oo leh 250MB waxay ku kacaysaa CLP $ 25,990, ama 30 maalmood oo 500MB ah CLP $ 49,990.
Dhanka kale, haddii aad xiisaynayso inaad mudnaanta siiso kaliya xogta moobiilka inta lagu guda jiro safarada dheer, shirkaddu waxay soo bandhigaysaa waxyaabaha beddelka ah ee soo socda: 30 maalmood oo boorso wareega ah, oo leh 90MB oo ah CLP $ 4,990, mid kale oo ah 200MB oo loogu talagalay CLP $ 10,990 iyo ugu dambeyntii mid 500 500MB loogu talagalay CLP $ 25,990.
Waxaan rabnaa macaamiisheenna inay ku raaxaystaan ​​100% maalmeedkooda bilaashka ah, ayagoon wax dhibaato ah kala kulmin soo diritaanka fariimaha iyo wicitaanka WhatsApp, helitaanka abaabulida, hoteelada iyo khariidadaha, taasoo ka dhigaysa khibradooda safarka inay yihiin wax sahlan oo ka qiimo jaban qiimaha nooga dhigaya kuwa ugu tartan badan suuqa. ”, ayaa sharxay Sebastián Precht, CMO ee WOM.
Boorsooyinkan wareega ayaa maanta loo isticmaali karaa ilaa 50 dal. Si aad u hawlgasho boorsadaada waa inaad lahaataa Qorshaha Lacag-Bixinta ama noqotaa macmiil Lacag Bixiya oo aad karti u siisaa Adeegga Caalamiga ah ee Socdaalka. Macluumaad dheeri ah waxaad ka heli kartaa https://www.wom.cl/roaming
War Saxaafadeedka Via – WOM